"Amaqanda ama-Easter" - a term isitsotsi ngoba "amaqanda ama-Easter" e imidlalo, ama-movie ne-software. Kuyinto uhlobo imfihlo, okuqukethwe okuyinto musa angena okuqukethwe jikelele kubukeka akunasisekelo ayinangqondo futhi ngokuvamile ezihlekisayo. Izimfihlo namaqanda Easter e abadali umdlalo ukuthuthukisa. Ikhonza njengabameleli uhlobo ihlaya, inqobo nje umbukeli uyaqonda ukuthi asho ukuthini. abadlali abanolwazi uthanda ukuthola efanayo "amaqanda ama-Easter" bebodwa. Beginners abangazange ngokucacile ukuthi yini amaqanda Easter imidlalo futhi kuphi, uncamela ukusebenzisa kukuphi "nozakwethu" abanolwazi kakhudlwana.
Isifinyezo "GTA 5"
I Theft Auto Grand - uchungechunge imidlalo ye-computer kusuka Rockstar Games studio. Kuzo, umdlali inikezwa indima isigebengu edolobheni elikhulu. Yena njalo ithola izicelo ezivela abaholi umsebenzi ngokuvumelana uhlobo ukuphanga nokudunwa zokubulawa, ekhuthaza ukuqaliswa uhlamvu ngokusebenzisa kwababusi emhlabeni lobugebengu. Phakathi nomsebenzi ungathatha itoho itekisi, courier, amaphoyisa, ambulensi umshayeli, nokunye. Cishe wonke chungechunge ungathola inqwaba izimfihlo, amahlaya kanye Parodies.
amaqanda Easter "GTA 5": amahlaya ngaphezu kwakho konke okunye
Izindaba ezimnandi kubalandeli yochungechunge "Breaking Bad." Ukuze ukubukwa platform Cheledan ezintabeni lapho sibhekene idwala embossed Jesse Pinkman - mate Walter White, ngubani ukwenza ampheta- ezimayini. Ukuze ngifike kuleyo ndawo kudingeka indiza enophephela emhlane. Kungenzeka uthole ophahleni esiteshini samaphoyisa noma esibhedlela. Ukutshala udinga ukwenza okuncane okwengeziwe observation platform kweNtaba Chiliad.
UFOs, Zombies futhi alethe
Emigwaqweni Los Santos ungahlangana zombie. Omunye wabo itholakala eduze esitolo uphawu Fashion Vinewood. Nge abafileyo nokuhamba ungakhuluma. Kusukela ingxoxo kuyoba sobala ukuthi lena akuyona zombie kwangempela, kodwa nje kumdlali wasesiteji odlala wanquma kabusha ukupenda ubuso emgwaqeni, kodwa njalo ukuphazanyiswa. Ukuze ubone yisithunzi ngenkathi kuhanjwa entabeni bheka Gordo. Phakathi th 11 namahora angu-12 th izolo, kubonakala intombazane isipoki. Ukuze ubone isipoki ngokuningiliziwe, kuzothatha isibhamu sniper.
Ezinye easter eggs e "GTA 5", njengoba kwezinye imidlalo eminingi, ahlanganiswe UFO. Esikhathini okwesihlanu ethandwa isiqophi umdlalo has a mkhathi njengabafokazi. Kodwa ukuze uyibona wakhe, udinga ngokugcwele ukuqedela umdlalo. Itholakala kwi Mount Chiliad, ekuqaleni imoto ikhebula ukuze uthole lapho kungenzeka ikhebula emotweni. Phezu kodonga zezakhiwo udonsela umfanekiso entabeni. Ngezinye unyawo lwayo eningi ezahlukene izibalo alien. Futhi phezulu uvezwa umkhumbi alien, sizungezwe imibani.
Enye amaqanda alien lephasika ingatholakala ekuqaleni umdlalo. Ngesikhathi kuqhubeka lesi sigameko we ephephile "Mission 1" umdlali kumele ukudubula kusukela amaphoyisa ngenkathi ezinye izinhlamvu uhleli kweza imoto. Elinye lamaphoyisa namanje ukudubula umshayeli. Khona-ke control uya umdlali. Ukuze ubone "Easter Egg", kubalulekile ngokushesha ngemva kokuwa ujantshi ngaphansi kwebhuloho. Ngo emfuleni wema kuyinto Alien.
Snowman kanye Snowman giant
Uma Zama ezinhle, akusona GTA 5 ungathola ngisho Bigfoot. Phakathi ukudlula mission "Predator" umdlali endaweni indiza ukuphishekela nabaphikisi ehlathini. Uma ngalesi sikhathi sniper sokuzingela ukufaka ezishisayo kanye ukubheka ihlathi kwaphezulu, nokwanda kwentshiseko ezinhle phakathi izinyamazane ngaphansi komunye wemithi, ungathola lo Bigfoot ukuma komklamo, okungukuthi Sasquatch. Kodwa izobonwa kuphela ambalwa. Nansi imfihlo ukuthi ngokushesha ngemva yokukhanya isiqondiso Snowman iphele. Uma ufuna ukuyihlola ngokuningiliziwe, ububanzi kumele igcinwe ukuze ohlangothini Bigfoot, ukuze akusho hit emjikelezweni oluhlaza. Kungenzeka futhi ukuzama ukubona ngokusebenzisa ukwanda yokukhanya abavamile.
Ngo "GTA 5" kungavela ngisho ngaphesheya Snowman giant. It kuyodingeka ukushayela ku ngumgogodla East Los Santos uphinde uhlole ezitolo ngokucophelela. Snowman obangela umnyango ovulekile Kolunye lwazo. Faka ishede ngeke zisebenze. Kodwa ungase ucabangele ngokuningiliziwe Snowman, usebenzisa isibhamu sniper. Yena kudingeka singagcini nje ngokuzuza ukwandisa isithombe, kodwa futhi ukudubula emabhokisini phambi into. Kulokhu, inhlamvu akazange ona hero.
Asikhumbule izinsuku ubudala
amaqanda Omunye lephasika ngo umdlalo kuholela GTA 2. omunye ohambweni we obuku Franklin imoto uyoxosha retmobilem Z-Type, okuyinto wahamba amalungu amaqembu Japanese Zaibatsu e ingxenye Grand Theft Auto yesibili. Futhi Trevor, ngaleso sikhathi ukubukela ekuphishekeleni indiza esuka ngenhla, ukuletha umusho ajwayelekile kusukela nomsakazo "GTA 2": "Wonke amayunithi wazi ...".
Enye amaqanda ngempela ezithakazelisayo lephasika ngo umdlalo ncamashi abathandi ubugebengu Thriller. Uma uya eningizimu-ntshonalanga ye-reserve kweNtaba Chiliad engakafiki imfuno yokuzingela, emgwaqeni ezweni, ungathola ngcaphuno kusukela Ayikho Izwe Old Abesilisa: izimoto ezinhlanu, emizimbeni eziningana efile kumbuthano virtual ipotimende elinesinqe $ 2 million.
Ukwazana kuqala nge Imbuzi Simulator
Coffe Stan Studios liyaziwa uchungechunge imidlalo Sanctum. Usanda wakhulula Imbuzi Simulator. Ingqikithi yalo mdlalo wukuthi umdlali ihamba phakathi komuzi futhi ukubhubhisa konke emehlweni. Kodwa lo mdlalo we-indie nakanjani kudingeka siyinake. Lapha, awazi ukuthi yini izimfihlo futhi kumnandi balinde ekhoneni. Nokho, ababukeli unake engamtholi easter eggs in the game. "Imbuzi Simulator" ikhanga izilaleli ukuthi uvumela ukulungisa nezinxushunxushu ezisemhlabeni ovulekile.
Izimfihlo e Goat Simulator
Ngokwe townsfolk, Onjiniyela imidlalo usuku lonke ekwenza lokho console kumnandi. Ukuze uthole enye ubufakazi ngaphezulu kwalesi sitatimende, nje sibheke Onjiniyela zezakhiwo ehhovisi umdlalo. amaqanda ama-Easter - akusiwona izimfihlo ezihlekisayo kuphela. Ngezinye izikhathi ziqukethe amandla abantu abadala ukuthi ukukusiza ngokushesha unqobe amazinga. Labo ungakabi ukhathele Flappy Bird (uma abadlali ezinjalo zisekhona), Ungazama ngesandla sabo e-Flappy Imbuzi. Eziyishumi amaphuzu ku-game mini kungenziwa umklomelo impumelelo I Flapmaster. Snake puzzle futhi nakanjani ekuletheni injabulo kwabasha isilwane sakho.
Omunye izici imidlalo evulekile-izwe ukuthi udinga ukuqoqa zonke izinhlobo ngononina izintwana. Isidlali Imbuzi Simulator kuyodingeka ubonise bonke ikhono lengqondo lokuhlola ukuqoqa igolide Izithombe izimbuzi. Enye easter eggs kule mdlalo ikuvumela ukuhlela "imbuzi imvula" R. Ukhiye kulesi sidingo ukuthola kumephu umbhoshongo eduze site, ezicijile nensimbi nemigoqo. Khona-ke ekhuphukela phezulu kwalo, ukususa nezimbuzi zangaphambi yeziboshwa. Umgomo sobukhosi igumbi sobukhosi ngemuva black umnyango, okuyinto phezu ophahleni lombhoshongo.
Amabili pool umba for emzini esekelwe indunduma. Njengoba kubonakale umbhoshongo, ongafinyelela ku sikusiphi hot air ukupholisa. Umbhoshongo inikeza imibono kukhanya abomvu, okuyinto empeleni pictogram. Ukuletha izimbuzi zakhe izisulu ezinhlanu, umlingisi uzuza amandla diabolical. Uhlu amakhono entsha kuhlanganise nekhono ukudala inkinobho ukuhlelwa kwesikhala sezinhlamvu F bese udonsa abamnyama amandla (okufanayo R ukhiye). Lesi sakamuva kusiza ukuheha izinto ilawulwe regdollu.
Ukuze ujabulele indiza, kudingeka ukwazi izimfihlo kanye easter eggs. Ungasebenzisa amakhono evamile. Okokuqala udinga sifinyelele kwi crane ne trampoline, esemgwaqweni ophahleni isakhiwo okuphambene. Phakathi iqhinga, cindezela lokuqala ukhiye Q, bese - F. yokugcina oyenza isebenze Ukwehla. Lesi sikhathi kungenziwa wachitha phezu Ukudilizwa insizwa uhlezi kwenye ezinhlangothini crane. Futhi ungayiqondi, kodwa nje ulinde glider bagxume phezu kwakhe.
Izimbuzi futhi ukuxhumana njengabafokazi
Indawo - indlu ezweni nge greenhouse eduze ensimini kakolweni. Kumele siqale sibheke phakathi egalaji futhi sokudonsa ulimi (E ukhiye) apharathasi alien. Khona-ke ukubambelela komkhiwane wakhe phezu kwegquma. Maphakathi omunye ukolweni imibuthano eduze ngayinyomfoza ngayiphosa kuyinto yesibani alien. imizuzwana 25 emva yesibani uthola idivayisi isixwayiso, kuzoba zifiki, niyobuthwa ngumuntu ugongolo imbuzi futhi baphathe emkhathini.
Outlast - horror yesimanje
Lona umdlalo omusha e isitayela eshaqisayo (horror) kusukela Barrel Red studio. Isenzo senzeka khona esibhedlela ishiywe engqondo Mount Massive, okuyinto eza intatheli Miles ngenhloso axazulule impicabadala kule ndawo. Umdlalo njalo esishubile umoya nokubusa. Into ebalulekile Gameplay ikhamera uhlamvu ngawo Miles wathutha ngokusebenzisa imihubhe.
Easter amaqanda Easter amaqanda sokwahlukana
Njengoba iye echazwe ngenhla, lo "amaqanda ama-Easter" kule midlalo uhlamvu yamahlaya kaningi. Kodwa kukhona kilomlayo, ezifana amaqanda Easter ku Outlast umdlalo. Kukhona amahlaya kancane, kodwa ukusiza ukusheshisa inqubo wanqamula ngamaphasiji esibhedlela sengqondo.
1. Ekupheleni Gameplay Miles ilahlekelwa ekamelweni. Uma ungenalo ubuvila uhambe ukubheka wakhe, uzothola amakhamera amabili nje: omunye phansi, kantsi kwesibili phezu kwetafula.
2. Uma, phakathi ukuhlala egcekeni ukuthi ujikise ikhanda lakhe imijondolo uhlangothi bese uvula ikhamera ebusuku umbono mode, udonga ingatholakala ipensela uhlaka Chainsaw kusukela Evil Dead 2.
3. Ngo-omunye amafayela umdlalo, umlandvomufi ngokuzinikela Rudolf G. Wernicke, kukhona isixhumanisi site nokuqukethwe zangasese.
4. Igama omunye wabasunguli be-studio - Philip Morin. Igama lakhe zingatholakala sanoma yisiphi isifundo emdlalweni: imbala kanye ibhethri umaka kanye nomsakazo.
5. Enye easter eggs kule mdlalo kwenza kube lula ukuze uqede. Uma ufika esibhedlela ngefasitela ngokushesha ubone "bendawo", ngoba ukuphela umdlalo udinga ngena kolunye uhlangothi.
6. Ukuthi ngesikhathi umdlalo Ukudlula akulona amabhethri igelezé Michael ikhamera, udinga fundisisa Imidlalo kwifolda kukhompyutha yakho. Kokunye, okungukuthi - e OLGame, kuyinto zokulungiselela ifolda ngamafayela eziningi. Shintsha amandla webhethri izilungiselelo kudingeka DefaultGame ifayela, ikakhulukazi - e NrmBatteryDuration umugqa. Ngokuzenzakalelayo, lapho kumi sibalo 150,0. Kungaba kuthathelwe indawo noma iliphi inani kuze kufinyelele 999999,0. Kungenxa ".0" format!
Minecraft - umdlalo othandwayo e isitayela "Sandbox" lapho kukhishwe izinsiza kanye nokwakha izakhiwo ezinkulu. Isikhala umdlalo sehlukaniswe cubes nge ukuthungwa esiyingqayizivele. Lokhu kwenza umdlalo mnandi. ukubaluleka Omkhulu lunikeziwe izixuku umdlalo - izinto ukuthi ukushintsha wokuqukethwe umdlalo, nika umdlali nakho ezintsha kanye nemigqondo. Geymp siqukethe izindlela ezimbili: ukwakhiwa uthele futhi ungafi. Esikhathini sokuqala udinga ukuqoqa izinsiza futhi uvikele izitha. In the mode ukubulawa umsebenzi wesibili kube nzima yokuthi umlingisi kungase minza noma aphonse phezu kwewa. Kodwa phakathi izimpi ungaba insini. Linikeza easter eggs e umdlalo Minecraft:
1. Uma imvu inikeze igama laleso JET, ke lizofiliza imibala ehlukene.
2. Uma ukunikeza Dinnerbone igama lanoma isiphi waleli viyo, isibonelo lwamathambo omuntu, kuyobahambela sibheke phansi futhi ngeke ngakho ukuhambisa.
3. Ngaphakathi imifantu okwami lesi siqhingi inkinobho enikeza ukufinyelela emhubheni. Lokhu easter eggs e umdlalo egijima ku inombolo iseva 41.
4. Kwenye amafayela umdlalo, umlandvomufi ngokuzinikela Rudolf G. Wernicke, kukhona isixhumanisi site nokuqukethwe zangasese.
5. kukhona umbhalo imigudu okwami, "kwakungekho Lonk".
6. Kukhona kuphela ithuba elilodwa 1000 ukuthi micreft elilotshwe ukuthi izovela kwimenyu enkulu.
7. Uma itshe elikhanyayo ukubeka uthuli abomvu, bese uyisebenzise, kwalelo tshe uyakuphohlozwa, ziphenduka zibe isihlabathi.
8. Esinye izinhlamvu lava Pourkour uhumusha njengoba "Ukuphi izicathulo zami?"
9. Ngo-kulesi siqhingi kuqala ehlathini kuya kwesokudla lwamakholi liwile mini-okwami.
10. Ngobusuku obandulela amaholide mobov izinguquko ukubukeka. Ngakho, minyaka yonke ngosuku olwandulela Halloween (31 Okthoba), ezinye izilo avele amathanga emakhanda abo. Ngobusuku obandulela uKhisimusi ukuthungwa bele washintsha. Bafana iziphiwo Christmas.
amaqanda Game Easter uhlobo izimfihlo azosiza abadlali kudlule masinyane umsebenzi noma ukuzijabulisa. Umdlali kumele uqaphele kakhulu futhi babe nesikhathi esiningi enyuka amazinga bese ubheka "amaqanda ama-Easter."
Kuyini umdlalo ubhedu emhlabeni ngo-2013? Imiphumela umdlalo lokugcina lonyaka
Princess Sofia (onodoli): isithombe, ukubuyekezwa